'निर्मला प्रकरणमा झुट्टो बोल्ने प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ'
काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले निर्मला हत्या प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेता लेखकले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै ओली र प्रचण्डले निर्मला हत्या प्रकरणमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण माफी माग्नुपर्ने बताएका हुन् ।
लेखकले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘निर्मला पन्त बहिनीको बलात्कार र हत्या प्रसङ्गमा झूठ्ठा बोल्ने सम्माननीय प्रधानमंत्री केपी. ओली र महिला हिंसा सरकार र पार्टीलाई असफल गर्ने षड्यन्त्र हो कि भन्ने पूर्व प्रधानमंत्री माननीय प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नु पर्छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत साता हेलो प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा पीडित परिवार र कन्चनपुरका स्थानीयले आशंका गरेका बम दिदी बहिनीप्रति सहानुभुति देखाउँदै नेपाली समाजलाई अधोगतिमा लाने प्रयासस्वरुप उक्त घटनालाई उछालिएको बताएका थिए ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीयले आशंका गरेका बम दिदीबहिनी दोषी देखिए कारवाही हुने भन्दै सरकारलाई छानविन नै गर्न नदिने प्रयास भइरहेकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा समाजलाई विकृत पार्ने संगठित प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसको असर कञ्चनपुरमा देखिएको संकेत गरेका थिए ।
कसले त्यस्तो प्रयास गरेको छ भन्ने नखुलाएपनि प्रधानमन्त्रीले घटनाप्रति सरकारको ध्यनाकर्षण भएर न्रै उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाएर छानविन थालिएको दावी गरेका थिए ।
‘यस्ता घटनामा राजनीतिकरण गर्नुहुदैन । राजनीति मिसाइनुहुदैन । पोष्टमार्टमपछि घर लगेको शव मेयरको घरमा पुर्याउनुपर्ने कारण के हो ? यसभित्र के छ ? मिडियामार्फत म के भन्न चाहान्छु भने महिला अस्मिताका कुरा हामीकहाँ धेरै हुन्छन् । स्थानीयले शंका गरेका बम दिदीबहिनीप्रति पनि छानविन गरौँ, उनीहरु दोषी देखिए कारवाही गरौ । तर, उनीहरु पनि महिला हुन् । त्यसमा पनि अविवाहित, उनीहरुको पनि जीवन होला, इज्जत होला ।’
त्यस्तै, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा कञ्चनपूर घटनालाई राजनीतिकरण गर्न खोजेको भन्दै नेकपालाई नै असफल पार्न खोजिएको हो कि भनेर आशंका गरेका थिए ।
कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया पन्तको हत्या र बलात्कारको घटनाको प्रहरी र छानविन समितिले अनुसन्धान भइरहेको बताएपनि झण्डै २ महिनासम्म पनि दोषी पहिचान हुन सकेको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेसले घटनाबारे हाल भइरहेको अनुसन्धान र सत्यतथ्य जानकारी गराउन संसदमा समेत उठाइसकेको छ । प्रतिपक्षको माग बमोजिम गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले आज (शुक्रबार) घटनाबारे संसदमा जानकारी गराउँदैछन् ।
यसैबीच घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक हुन ढिलाइ हुँदा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच यहि विषयमा आरोप प्रत्यारोपको जुहारी चल्न थालेको छ । घटनालाई राजनीतिकरण गर्न खोजेको सत्तापक्षको भनाई सार्वजनिक भइरहेको छ भने प्रतिपक्षले सत्ताकै आडमा बास्तविक दोषी पहिचान र कारवाहीमा ढिला गरेको आरोप लगाउदै आएको छ ।